Merapi Sunrise fuulitaanka cuntada fudud ee Xalaal -
Merapi Sunrise fuulitaanka Cunto fudud oo Xalaal ah
Haddii aad waligaa ku riyootay inaad fuusho fulkaano firfircoon, socodka Merapi waa khibrad ay tahay inaadan ka maqnaan. Waxaan caadeysaneynaa inaan kahadalno Yogyakarta oo ah wadnaha dhaqanka ee Indooniisiya, iska ilaawida sidoo kale waxaa ka buuxa dabeecad cajaa'ib leh iyo muuqaalo aad u balaaran .Waxaa ugu caansan sida loo arko Mount Merapi, oo laga arki karo meelo fog iyo mid ballaaran. Fulkaanadan quruxda badan siyaabo kala duwan ayey kaaga nixin doontaa, marka laga eego aragtida baaxadda weyn leh iyo dhirta cufan ee ay u fasaxday lo'da lo'da iyo dhul barwaaqada ah. Waxay ka qarxday marar badan qaab awood badan, taasoo ka dhigaysa Merapi inay noqoto halyeey halyeey dabiici ah oo ka dhex shaqeeya Bartamaha Java. Waxaad ku raaxeysan doontaa sheekooyinka iyo halyeeyada maxalliga ah ee ku saabsan ruuxa Merapi iyo qaraxyadii hore, iyo sababta ay fulkaanaha u sii wadayso inay aragto ayna raacdo khubaro badan oo fulkaano ah.
Waxaan kaa soo qaadaneynaa hudheelkaaga (soo qaad adeegga degaanka) qiyaastii 10.00 pm Kadibna waxaan kuu kaxeyn doonnaa Tuulada Selo, oo ku taal dhinaca woqooyi ee fulkaanaha. Diyaarinta ka dib waxaan bilaabi doonnaa fuulida fulkaanaha waxaanan guda galaynaa socod ku dhow lix saacadood ilaa ay ka gaaraan fulkaanaha. Marka ugu sarreysa waxaan ku raaxeysanaa falaaraha qorraxda ee ugu horreeya ee jabaya, ka dib markhaatiga markaan nahay qorrax-soo-baxa waxaan ka dhigi doonnaa meel wanaagsan oo aan ku riyaaqi karno aragtida magaalada Yogyakarta ee Koonfurta iyo Folkaanaha Merbabu ee dhinaca bari. Markaa waxaan heli doonnaa nasasho yar oo waxaan ku raaxeysan doonnaa muuqaalka laga soo qaaday Pasar Bubar ka hor intaanan u dhaadhicin Selo.
Gaari ayaa nagu sugaya Selo si uu dib noogu celiyo Yogyakarta galabta.
Haddii aad waligaa ku riyootay inaad fuusho fulkaano firfircoon, socodka Merapi waa khibrad ay tahay inaadan ka maqnaan.
Tours Xalaal Maalin Buuxda